वेलायतमा हुने संसदीय निर्वाचनमा एक गैरआवासीय नेपाली उम्मेदवार हुने::KhojOnline.com
वेलायतमा हुने संसदीय निर्वाचनमा एक गैरआवासीय नेपाली उम्मेदवार हुने
लन्डन- ८ जुन मा वेलायतमा हुने संसदीय निर्वाचनमा एक गैरआवासीय नेपाली उम्मेदवार हुने निश्चित भएको छ। डार्टफोर्ड काउन्सिलमा हाल लेबर पार्टीबाट काउन्सिलर भएका नेपाली मुलका डा. बच्चु कैलाश कैनी डार्टफोर्ड संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसदको उम्मेदवार हुने भएका हुन्।
वेलायतको प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेबर पार्टीले तोकेको योग्यता पुगेका योग्य सदस्यहरुबाट संसदीय निर्वाचनमा चुनावमा उम्मेदवार हुन चाहेनेले आवेदन मागेकोमा डा कैनीले समेत आवेदन दिएका थिए।
उम्मेदवारी चयनको प्रारम्भिक प्रकृयामा उक्त क्षेत्रबाट डा कैनी सहित जम्मा तीन जनाको आवेदन परेको थियो । पहिलो चरणमा पार्टीले डेइजी पेजलाई चयन गरे पनि उनले स्वइच्छाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए पछि पार्टीले कैनीलाई अन्तिम उम्मेवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
शनिवार कैनीले नागरिकन्युजसँग पार्टीले आफुलाई उम्मेदवार बनाएकोमा प्रसन्नता प्रकट गर्दै ११ मेमा औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने जानकारी दिए । उनले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रका अतिरिक्त डार्टफोर्ड क्षेत्रको जनताको स्वाथ्य, शिक्षा, यातायात र शहरी विकास आफ्ना मुख्य चुनावी मुद्दा रहेको जनाए।
वेलायतको संसदीय ऐतिहासमा नेपाली मूलको उम्मेदवार बनेको पहिलो पटक हो । यसअघि भारतीय, पाकिस्तानी मूलका व्यक्ति उम्मेदवार बनि सकेका छन्।
डा कैनी लेबर पार्टीको सन २०१४ मा म्यानचेस्टर मा भएको बार्षिक अधिवेशनमा महासमिति प्रतिनिधि थिए । पार्टीको स्थानीय निकायको ट्रेड युनियन संयोजकको रुममा समेत काम समेत समालेका उनले सन २०१५ को स्थानीय निर्वाचनमा उक्त काउन्सिलको काउन्सिलरको रुपमा चार बर्षको लागि निर्वाचित भएका थिए।
तनहुँको कमलाबारीमा जन्मिएका डा. कैनी अहिले क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल, लन्डनमा बरिष्ठ ब्यबस्थापकको रुपमा कार्यरत छन। बेलायतमा नेपाली समुदायकाबीच चिर परिचित र सक्रिय डा. कैनी समसामयिक बिषयमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख रचनाका साथै कथा र कबिता समेत लेख्छन्।
भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले राजनीतिक भेटवार्तालाई आज पनि निरन्तरता
माघ, काठमाडौं । नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहेकी भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले राजनीतिक भेटवार्तालाई आज पनि निरन्तरता दिएकी छन् । बिहीबार काठमाडौं उत्रिएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी स्वराजले अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरिरहेकी छन् । सोल्टी होटलमा जारी भेटमा पछिल्लो राजनीतिक...
लागू औषध तस्करको आरोपमा इन्डोनेसिया प्रहरीले एक नेपालीलाई गोली हानेर मारे
माघ, काठमाडौं । लागू औषध तस्करको आरोपमा इन्डोनेसिया प्रहरीले एक नेपालीलाई गोली हानेर मारेको छ । मारिनेमा ३४ वर्षीय शरण तामाङ छन् । उनको नेपालको ठेगाना भने खुलाइएको छैन । लागू औषध तस्करीको सूचनाका आधारमा अपरेशन चलाइएको सेन्ट्रल जाकार्ता मेट्रो पुलिसका चिफ सिनियर कमिशन रोमन हुटाजुजुले...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र भारतीय उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीबीच भेटवार्ता
काठमाडौं- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र भारतीय जनता पार्टीका नेता एवं उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीबीच भेटवार्ता भएको छ। भारतको लखनउस्थित सरकारी निवासमा उनीहरुको भेटवार्ता भएको थियो। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री योगीले पूर्वराजा शाहलाई दोसल्लाह ओढाएर सम्मान गरेका थिए। ‘आज लखनउस्थित सरकारी निवासमा नेपालका पूर्व नरेश ज्ञानेन्द्र वीर...